Global Voices teny Malagasy » Tarika Goatemalteka Mampiasa ny Tantara An-tsehatra Ho Fiatrehana Ny Herisetra Mihatra Amin’ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Marsa 2015 8:27 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Vidal Nandika (en) i Kelley Johnson, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Goatemalà, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina
“Naciendo” (Vao misondrotra) dia tantara an-tsehatra vaovao novokarin'ny Las Poderosas. Sary avy amin'ny vondrona, nahazoan-dalana.
Amin'ireo fampisehoana izay sady manasitrana no mampahery, mandefa hafatra mahery vaika ho an'ny fitoavian'ny lahy sy ny vavy sy manohitra ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy avy amin'ny seho ny vondrona teatraly Goatemalteka Las Poderosas  (Vehivavy Mahery). Hatramin'ny 2008, nanenika ny media sosialy sy ny faritra ny asan'izy ireo. Hoan'ireo vehivavy ireo, ny teatra dia natao hanasitranana, hanameloka, hifandraisana sy hanentanana ao amin'ny firenena iray, izay araka ny vaovao avy amin'ny Vehivavin'ny Firenena Mikambana , “vehivavy roa isan'andro eo ho eo no maty misy mamono”.
Niforona ny vondrona taorian'ny fandraisany anjara tamin'ny traikefa momba ny tantara an-tsehatra tamin'ny horonantsarin'i Marco Canale “Hoy puedo ser” (Afaka aho Ankehitriny). Nitarika ireo vehivavy ireo mba hanokan-tena tanteraka aminn'ny fitrandrahana ny herin'ny fijoroana ho vavolombelona sy ny tenin'ny fihetseham-po izany traikefa izany . Ny fanoratana no tena hifantohan'izy ireo ary koa ny filalaovana tantara izay mampiseho ireo herisetra isan-karazany, miainga amin'ny miharihary indrindra hatramin'ny misoko mangina indrindra, izay tsy mba tazana eo amin'ny fiainana andavanandro, ka mba ho hitan'ny olona rehefa iaraha-mahita.
Mitanisa ny tantaran'ny Las Poderosas ny bilaogy Heroínas  (Vehivavy Mahery fo):
Nokaikerin'ny viriosin'ny teatra ireto vehivavy fito ireto sy ny zanany, ka nanapa-kevitra hanohy ny famokarana sy hiaka-tsehatra mitetitety an'i Goatemala. […] Noho ny lahatra sy ny nofin'ny iray tamin'ireo mpandray anjara, Lesbia Téllez, no nahaterahan'ny Las Poderosas; nitafy ny luchadoras [mpanao tolona] ireo sisa velona niaka-tsehatra. Ny hanasitrana ireo izay niharan'ny herisetra amin'ny alalan'ny catharsis (fitsaboana amin'ny alalan'ny fidiovam-pahatsiarovana) sy ny toeram-baovao atolotry ny sehatra no andraikitr'ity orinasan'ny teatra tsy manam-paharoa ity […] Rehefa nanontaniana ny dikan'ny teatra ho azy ireo, tsy nisalasala ireto vehivavy fito “Ligin'ny Fahamarinana (Justice League)” […] ireto nilaza fa famonjena sy hery mitarika ny fanovana hoan'ny fiainan'izy ireo izany.
Manome hevitra tsara kokoa amin'ny fomba fanoratra sy ny fomba fiasan'izy ireo ny sombin-tsehatra an-dahatsarin'ny vondrona. Mampiseho ireo mpikambana ao amin'ny Las Poderosas mizara ny traikefan'izy ireo manokana ity lahatsary ity:
Nandidy ahy ho faty ny vadiko. Voatifitra teo amin'ny foko aho. Very ny sandriko; saingy nahazo rariny aho.
Mandray anjara amin'ny asam-piarahamonina miaraka amin'ny vehivavy avy amin'ny faritra isan-karazany, na ao anatiny na ivelan'i Goatemala ny Las Poderosas. Mandrisika ny vehivavy izy ireo hizara ny traikefany ho fisarihana ny saina manoloana ny olan'ny herisetra ary hanome vahaolana amin'izany. Ohatra iray amin'ny ezak'izy ireo ny fandraisana anjara amin'ny Andro Iraisam-pirenena ho Fanafoanana ny Herisetra Mihatra amin'ny ny Vehivavy  miaraka amin'ny “vehivavy teo amin'ny 60 teo avy amin'ny kaominina 8 ao anatin'ny Departemantan'i Sololá ao Goatemala ; mpitarika sy nierem-pahafatesana tamin'ny herisetra ny sasany tamin'izy ireo”.
Miompana amin'ireo karazan'endriky ny herisetra ny fampisehoana vao haingana indrindra “Naciendo ” (misandratra) nataon'izy ireo, anisan'izany ny fisiany ao amin'ny lova samihafa ao Goatemala sy ny ady an-trano mamirifiry  ao amin'ny firenena izay nahafatesana olona maherin'ny 250.000. Lalindalina kokoa noho izany, manomboka miresaka ny vatana, ny firaisana ara-nofo ary ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fikaroham-panahy ity karazam-pamokarana vaovao ity:
Fampisehoana amin'ny Naciendo. Nahazoan-dalana.
Nivoaka avy amin'ny fanadiihadiana momba ny fitaovam-pananahantsika, ny fiaviantsika ary ny ady ny Misandratra [“Naciendo”]. Miresaka amin'ny renintsika, ny zanatsika vavy, ny zafikelintsika vavy ary ireo vehivavy izay tafavoaka velona tao anatin'ny ady mitam-piadiana izahay, mikaroka ny diantongotry ny tantarantsika, ny firenentsika ary ny vatantsika. Ahoana izany hoe miaina isika? Inona no iainantsika?
Manatontosa ity tantara an-tsehatra ity, mahatsiaro, miezaka mahatakatra ny maizina sy ny mazava, manome anarana, mihira, na miresaka momba ny fomba fanaovantsika firaisana ara-nofo ho fomba iray ijerena amin'ny maso ny lalana malalaka dia malalaka diavin'ny tsirairay ao anaty ao.
Mijery izany tahaka ny renirano.
Izany no toerana nisandratantsika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/03/25/68671/
 seho : https://www.facebook.com/laspoderosas.teatro?fref=ts
 Las Poderosas: http://wikiguate.com.gt/colectivo-teatral-las-poderosas/
 Vehivavin'ny Firenena Mikambana: http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
 Andro Iraisam-pirenena ho Fanafoanana ny Herisetra Mihatra amin'ny ny Vehivavy: https://www.youtube.com/watch?v=cWoctR3Pet4
 Departemantan'i Sololá ao Goatemala: http://en.wikipedia.org/wiki/Solol%C3%A1_Department
 ady an-trano mamirifiry: http://en.wikipedia.org/wiki/Guatemalan_Civil_War